Manchester United dalab ayay ii soo dirtay:- Conte
HomeWararka MaantaManchester United dalab ayay ii soo dirtay:- Conte
Khabiirkan 45 jirka ah wuxuu 3 jeer oo xidhiidh ah horyaalka Talyaaniga la qaaday Juventus ka hor intii aanu xagaagii tagay ka dhaqaaqin naadiga waxaanu tilmaamay in shayaadiinta dharka casi xidhiidh la soo samaysay kahor intii aanu hellin shaqada xulka Talyaaniga.
Tababaraha xulka qaranka Talyaaniga, Antonio Conte ayaa fashilay in kooxda Manchester United raadco ugu jirtay hellitaankiisa, si weyna ay u doonaysay inuu kooxdeeda tababare u noqdo xagaagii hore.
45 jirkan ayaa iska casilay xilkii tababarenimo ee naadiga Juventus bishii July 2014 kii kadib markii uu saddex jeer oo is xigta u qaaday horyaalka wadanka Talyaaniga ee Seria A, isla xagaagaas laftiisana shaqadii tababaraha xulka kala wareegay Cesare Prandelli.
Laakiin wuxuu daboolka ka qaaday in kooxda United ay dalab u soo dirsatay si uu ugu biiro naadiga Old Trafford, xiligaas oo kooxdu raadco ugu jirtay hellida tababare cusub oo laylya naadiga heerka koobaad.
“Kooxda Ingiriiska ah oo damacsanayd inay heshiis ila saxeexato ayaa waxaa soo af-jaray markii aan qalinka ku duugay tabababarenimada xulka qaranka,” ayuu Conte ku yidhi telefishanka TV show Grand Hotel Chiambretti, oo tababaraha wax ka weydiiyey inuu mar u muuqday inuu buuxiyo shaqada uu hadda hayo tababaraha reer Holland ee Louis van Gaal.
“Laakiin tartanka aan u gallay shaqada tababarenimo ee xulku waxay ahayd mid shaqsiyan aan anigu ugu dagaal gallay. Inaad tababare ka noqoto meel shaqadaadu tahay soo xulashada ciyaaryahanadu, waa arin qiimo weyn leh oo aan la helli karin.”
Kooxda shayaadiinta dharka caska ayaa baadi goobayay tababare cusub kadib David Moyes, ninkii shaqada kala wareegay Sir Alex Ferguson, oo loo caydhiyey kadib dharaaro qadhaadh iyo guuldarooyin xanuun badan xambaarsan oo kooxdu sabaysay.
Wakhtiga Ay Dhacayso Ciyaarta El Clasico Oo La Shaaciyey
Chris Eubank Jr vs Avni Yildirim – FULL HDH